#CODE - Usoro mmeghe mmemme - Geofumadas
#CODE - Usoro Mmeghe
Mụta iji mmemme, usoro mmalite nke mmemme, flowcharts na pseudocodes, mmemme site na ọkọ
Ọ chọrọ ịmụ
Mara otu esi ewunye mmemme na kọmputa
Wụnye ihe omume PseInt (Enwere mmụta nke na-akọwa etu esi eme ya)
Wụnye mmemme DFD iji mepụta usoro mmiri (E nwere ọzụzụ pụrụ iche nke kọwara etu esi eme ya)
Kọmputa iji rụọ ọrụ niile.
Mụọ isi ntọala nke mmemme mmeghe ụzọ site na ọkọ maka ndi choro imuta ihe site na ihe omuma banyere mmemme ma tinye ha n’oru.
N'ime usoro a Okwu mmalite nke mmemme ị ga-amata nke ahụ Isi mmalite nke mmemme Ga-amụta imepụta Flow Diagrams na Pseudocodes n'ụzọ bụ isi ma zuru oke.
Nweta ebe nrụọrụ weebụ m.
Nyocha ụfọdụ nke ụmụ akwụkwọ anyị werela ya:
Juan de Souza -> 5 Kpakpando
O bu uzo zuru oke nye ndi n’enwebeghi mmeko nke mmemme. Ying na-amụ ọdịnaya a tupu ị ga - abanye n'ime mmemme ga - eme ka ndụ gị dịkwuo mfe. Enwere m olileanya na achọtara m ụzọ a otu afọ gara aga. Nke a bụ naanị mmeghe maka usoro mmemme na-akuzi site na pseudocode na flowcharts m chọtara. Ezigbo mma
Ahụmịhe ahụ dị mma ebe ọ bụ na nkọwa ndị ahụ zuru oke ma kọwaara ya onye ndụmọdụ ya. Iheoma!
Jesús Ariel Parra Vega -> 5 Kpakpando
Achoputara m ya nma !!
Onye nkuzi gosipụtara n'ụzọ doro anya ma bụrụkwa nke doro anya, echiche ndị bụ isi maka mmemme. Na mgbakwunye, ọ na-akụzi otu esi eji mmemme abụọ na-eme ka mmụta dịkwuo mma n'ịkụzi onwe gị. Kọwaa echiche dị iche iche wee nye ihe atụ banyere ha site na iji ngwaọrụ ndị emepụtara na mbido mmụta ahụ.
Santiago Beiró -> 4.5 Kpakpando
O doro m anya ịkọwa na ịkọwa ihe ọmụma. Ana m akwado usoro ahụ.
Alicia Ilundain Etchandy -> 1.5 Kpakpando
Ọ dị njọ nke ukwuu na m na-aga n'ihu na-etinye ihe ọzọ na oge ọ bụla m laghachiri na weebụsaịtị Udemy ọ na-egosi m na m ka nwere ihe ndị mezuru.
Will ga-ama ihe ndabere niile, ruo mụta iji mmemme, Site na ihe ọmụma ị nwetara na usoro a, ị ga-enwe ntọala dị mkpa iji ghọta asụsụ mmemme ọ bụla ịchọrọ.
N'oge a, a ga-emepụta ihe omume Pseudocode y Flowchart
E kewara ụzọ ahụ ụzọ abụọ.
Isi mmalite nke mmemme
Nhọrọ usoro algorithmic
Ntughari usoro algorithmic
Nhazi na onu ahia
Y enwere akụkụ ndị ọzọ ga-agbakwunye na usoro ahụ oge niile ma ọ bụrụ na ichereghi ogologo oge ma ọ bụrụ na afọghị gị na eweghachila ego gị.
Onye onye agbadoro uzo ahu:
Ndi mmadu niile choro imuta ihe omume
Studentsmụ akwụkwọ ndị na-amalite n’ụwa nke mmemme
Mmụta Injinịa Sistem
Studentsmụ akwụkwọ ndị chọrọ ịmụta ihe site na ntọala ruo mgbe ha ga - enwe ike ịghọta echiche ihe mmemme.
Disclaimer: E bu ụzọ wepụta ọhaneze na Spanish n'asụsụ Spanish. Na nzaghachi na arịrịọ nke ndị ọrụ na-asụ Bekee, maka àgwà mara mma na uru ọ bara, anyị na-etinye oge na nsụgharị a. Ederede na nkọwa dị na Bekee, ọ bụ ezie na ngwanrọ nke ngwanrọ ejiri na ụfọdụ ederede nke usoro ihe omume etinyebere na Spanish ka ị ghara ịhapụ itinye akwụkwọ ọrụ.
Previous Post«Previous #GIS - QGIS 3 nzọ ụkwụ site na nzọụkwụ site na ọkọ
Next Post #LAND - Civil Course 3D maka ọrụ obodo - Ọkwa 4Next »